Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho
February 24, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Marxuum Cusmaan Cilmi Boqore. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee Sabtida lagu dilay magaalada Muqdisho.
Cusmaan Cilmi Boqore, oo lagu qiyaasayo 80-sanno jir kaasoo ahaa xildhibaanka ugu da’a weyn golaha baarlamaanka ayaa waxa toogtay niman hubeysan isaga oo gaarigiisa ku dhex watay degmada Kaaraan, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada dilka xildhibaan Boqore, sida ay ku warantay wakaalada wararka AP.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo raysulwasaare Xasan Cali Khayre ayaa cambaareeyay dilkaas, waxayna fareen haayadaha ammaanka in ay sameeyaan baaritaan.
Asad Cusmaan Cabdullaahi oo la filayo in loo magacaabo agaasimaha NISA
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowlada Puntland ayaa soo bandhigtay sawirada niman katirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo ka dambeeyay weerarkii isbiimaynta ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Laamaha amaanka Puntland ayaa la faray in ay si deg deg [...]
Baarlamaanka Puntland oo meelmariyay in si guud loo ansixiyo golaha cusub ee wasiiradda
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta oo Axad ah meelmariyay in si guud loo ansixiyo golaha cusub ee wasiiradda Puntland. Kulanka golaha baarlamaanka, oo ay fadhiyeen 53 xubnood ayaa 26 kamid ah ogolaatay in [...]